सिमानामा लडिरहेको सिपाहीलाई सोध्नुहोस्- जीवन कस्तो छ? « Media for all across the globe
सिमानामा लडिरहेको सिपाहीलाई सोध्नुहोस्- जीवन कस्तो छ?
खुसी हुनेहरु अबस्य दुःखी पनि हुन्छन्। यो अनौठो हुदै, होइन। सुख र दुःख मिसियो भने तनाब पढ्छ। मानिस सधै सुख या दुःखमा हुनै सक्दैन। दैनिकी त पक्का फेरिन्छ।
जीवनका आआफ्नै व्याख्याहरु दिमागमा आउनेछन् – यदि, शान्त भएर सोचियो भने। त यो पनि जरुर छ कि, प्रत्येक मानिसको परिभाषा उसको स्थिति अनुरुप हुन्छ। जीवन पनि समय–समयमा परिवर्तन हुन्छ। समाज फरक र फराकिलो पनि रहेछ। सबैमा तर चीजप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आउँन जरुर देखिन्छ। ताकि जीवनमा सुन्दर र सरल भाब सुधार होस्। जीवन छोटो तर धेरै विशाल छ। यहाँ उतार–चढावहरू छन् र आइरहने छन्। ठुलो संसारमा जीवन अनिश्चित छ।